SOAMAHAMANINA : Mbola iharan’ny fandrahonana hatrany ireo mponina
Na dia efa tsy ao Soamahamanina intsony aza ireo Sinoa dia mbola mikasa hanao fihetsiketsehana ireo mponina mba hanesorana tanteraka ireo fitaovana mbola miantsona any an-toerana amin’izao fotoana izao. 20 décembre 2016
“Efa lasa ireo Sinoa, saingy ireo kamiaobe sy milina fitrandrahana mbola tazanay ao avokoa. Tsy hanaiky hatramin’ny farany izahay fa tsy maintsy mody miaraka amin’izy ireo ihany koa ireo fitaovana rehetra ireo”, hoy Rakotonirina Christophe, mponina ao Soamahamanina.
Araka ny fanazavana nomen’ity farany hatrany dia mahazo fandrahonana hatrany avy amin’ireo mpitandro filaminana izy ireo fa “raha mbola misy ny manao fihetsiketsehana na manao fitarihana an-dalam-be dia tsy maintsy hisy avy hatrany ny fisamborana”. Fantatra fa ao anatin’ny fotoana fanetsana ireo mponina amin’izao fotoana izao ka izay no mahatonga ny hetsika mangingina fa rehefa vita izany dia hiverina hanao ny hetsika indray izy mba tsy hisian’ny firoroan-tsaina amin’ny mety hiverenan’ireo Sinoa ireo indray.
Fotoam-bavaka ho an’ny Tanindrazana
Ny alahady antoandro teo nanomboka tamin’ny 2 ora dia nisy fotoam-bavaka lehibe izay notanterahina tao amin’ny Ekar Mb Dorothé ao Soamahamanina. Ny mpikambana avy eo anivon’ny vondrona Mapar no nanatanteraka izany tany an-toerana mba ho fitondrana am-bavaka ny Tanindrazana, ny vahoaka malagasy ary indrindra indrindra fa nitondrana am-bavaka manokana an’i Augustin Andriamananoro izay hiatrika Fitsarana anio.
Ankoatra ireo olon’ny Mapar dia tonga marobe nanotrona ny fotoana ny fianakaviany sy ny mponin’i Soamahananina. Ireto farany izay manameloka an-kitsirano izao antsojay mianjady amin’ity minisitra teo aloha ity. Nambaran’izy ireo fa “tsy misy nidiran’i Augustin Andria- mananoro velively ny hetsika rehetra teo Soamahamanina. Sady tsy namatsy vola izy no tsy nitarika fa nanampy tamin’ny fitondrana ireo naratra tany amin’ny hôpitaly fotsiny”. Noho izany, mangataka ny mponina ao an-toerana indrindra fa ireo mivondrona ao anatin’ny Vona fitiavan-tanindrazana, mba hamoahana azy tsy misy fepetra any am-ponja.